Takelaka fampitahana: Iza amin'ireo mpitety tranonkala no mandany be indrindra? Rekonq, Firefox, Chrome, Chromium na Opera | Avy amin'ny Linux
Takelaka fampitahana: Iza amin'ireo mpitety tranonkala no mandany be indrindra? Rekonq, Firefox, Chrome, Chromium na Opera
Androany aho nifoha tamin'ny te hahafanta-javatra ... ohatrinona ny MaiLinux mandany misokatra amin'ny browser?
Ka nanapa-kevitra ny hanokatra azy io aho ary hahita ny fanjifana novokarin'i Firefox (ny tranokalaniko lehibe), fa avy eo dia nieritreritra aho fa isaky ny mpitety tranonkala dia tokony mihinana amin'ny fomba hafa aho, ka nieritreritra aho fa mety ny manao tabilao fampitahana izay mampiseho ny fanjifàn'ny mpitety tsirairay ampiasaiko. rehefa misokatra ireto Avy amin'ny Linux.
Ary eto dia asehoko azy ireo:
Araka ny hitanao, eto izahay dia mampitaha:
Ireto statistikan'ny fanjifana hitanao ireto dia ho an'ny mpizaha isaky ny mombamomba azy madio, izany hoe mampiasa mombamomba vaovao tanteraka aho ... koa na ny Firefox na ny Chrome / Chromium dia tsy nasiana addons napetraka, tsy misy mpitety mampiasa cache satria tsy nisy na inona na inona. , sns sns. Misokatra voalohany ny rehetra 😉
Araka ny hitanao izao, Firefox dia ilay mandany RAM be indrindra, miaraka amin'ny RAM 48MB laniana, arahin'ny Opera miaraka amin'ny efa ho 30MB, avy eo ho an'ny rekonq miaraka amin'ny 24MB, avy eo miseho miaraka amin'ny 15MB i Google Chrome, ary farany izay maivana indrindra chrome miaraka amin'ny RAM 12MB ihany no laniana.
🙂… tsy marina daholo ireo angona ireo. Mitranga izany roa Google Chrome como el chrome tsy mampiasa kofehy tokana izy ireo, noho izany ireto mpitsikilo roa ireto dia TSY mandany izany. Mba hanazavana azy tsara kokoa dia asehoko anao ny pikantsary, miaraka amin'ny dingana rehetra izay Chromium:
Araka ny hitanao dia misy 7 dingana mifandray amin'i chrome, noho izany TSY AZONTSIKA lazaina fa toa ny aseho amin'ny pikantsary amin'ny voalohany dia 12MB fotsiny no lanin'ny Chromium.
Raha ampianay ny fanjifana ireo fizotran'ny Chromium ireo dia mamarana izany izahay chrome miaraka amin'ny FromLinux open dia mandany bebe kokoa na latsaka 40MB an'ny RAM.
Toy izany koa no mitranga amin'ny Google Chrome, satria TSY handany 15MB RAM fotsiny izy io, fa kosa ny fampidirana ireo kofehy na fizotrany rehetra, dia nanatsoaka hevitra izahay fa mandany RAM mihoatra ny 46MB.
Ka farany, izao no ho vokany:
Firefox «-» RAM 48MB
Google Chrome «-» RAM 46MB
Chromium «-» RAM 40MB
Opera «-» RAM 30MB
Rekonq «-» RAM 24MB
Ary tadidiko fa TSY MISY mampiasa angona momba ny piraofilina, izany hoe isaky ny mpitety tranonkala vaovao, napetraka fotsiny ary tsy misy angona na fikirakira voatahiry ao amin'ilay mombamomba.
Saingy, satria tsy fahita firy fa madio foana ny mombamomba ny mpitety tsirairay, dia holazaiko aminao fa raha ny zava-misy amiko, miaraka amin'ny fikirakirako, addons ary data hafa momba ny mombamomba ny mpitety tsirairay, ... tsara, asehoko anao ny angona 😉
Araka ny hitanao ... Opera dia tsy ilay mpizaha tena maivana indrindra satria toa eo am-piandohan'ny lahatsoratra izy, satria rehefa Opera (toy ny ambiny koa) dia manomboka manangona ary avy eo mampiasa angona avy amin'ny cache azy, rehefa manana cookies, tenimiafina voatahiry, sy ny hafa izy. configurations, tsy misy isalasalana fa mihabe ny fihinanana azy, raha ny amiko dia tonga ONLY miaraka amin'ny FromLinux misokatra mihoatra ny 80MB RAM lany.
Ireo valiny ireo dia mazava ho azy fa tsy voatery hitovy ho anao rehetra, fa afaka manome anao fahitana farafaharatsiny, sa tsy izany? 😉
Manantena aho fa nahaliana anao ity lahatsoratra ity, ary azoko antoka fa te hampitahanao ny fanjifana ny browser-nao ... raha izany, aza mijanona, manaova fampitahana ary asehoy eto ny angona! 😀… amin'izany fomba izany no ahafahantsika rehetra manana hevitra marina araka izay tratra 🙂
Tsy fifaninanana ny hijerena izay browser manafoana farafaharatsiny na kely kokoa, fa iza kosa no mitazona ny fifandanjana tsara indrindra eo amin'ny safidy, ny endri-javatra ary ny fanjifana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Takelaka fampitahana: Iza amin'ireo mpitety tranonkala no mandany be indrindra? Rekonq, Firefox, Chrome, Chromium na Opera
MatthewD dia hoy izy:
Nihevitra aho fa nieritreritra fa maivana ny Opera.
Valiny tamin'i MateoD
Diso ny fanehoan-kevitra, napetrako «Nieritreritra aho fa nieritreritra» 😛
Raha ny marina tsia, farafaharatsiny izy io no mandany ahy indrindra.
Pirate piraty dia hoy izy:
Miankina amin'ny atao hoe maivana izany.
Ohatra, ny Opera dia mila fotoana kely kokoa hanombohana noho ny Firefox ary na dia be aza ny fanjifana fitadidiana azy, dia mirona kokoa ny fitetezana.
Raha ny tokony ho izy, ho an'ireo izay tsy mahalala, Opera dia mampiditra mpanjifa e-mail iray izay miasa tsara, mpamaky TANY, RSS, mamela ny fisintomana ireo rakitra Torrent, mifandray amin'ny IRC, mamorona naoty ary tsy fantatro izay hafa.
Raha ampianao ny fanjifana RAM manana programa mitovy amin'ireo fiasa ireo amin'ny fotoana iray dia ho hitanao fa tsy dia avo loatra toy izany ny RAM an'ny Opera sy ny fikirakirana azy.
Izy io koa dia mifandrindra tsara amin'ireo karazana samihafa toy ny telefaona finday, takelaka na solosaina hafa.
Etsy an-danin'izany, ho an'ny firaketana an-tsoratra dia mpampiasa Firefox aho ary ny Opera dia tsy manana mpamorona fanampiny mitovy ary misy ny sasany izay tsy vitako raha tsy misy. 🙁
Mamaly an'i Pirate Pirate
Mazava ho azy, Opera dia mampiditra be dia be, mihoatra ny browser tsy misy fangarony, ary misy safidy betsaka noho ny hafa rehetra, tsy mbola nilaza zavatra hafa mihitsy aho.
Fa raha ny amiko, tsy mila mpanjifa mailaka ao anaty tranokala aho, mba hanomezana ohatra.
Manoro hevitra ny hahita ireo toetra rehetra ato amin'ny Wikipedia aho:
framesSSS dia hoy izy:
mitazona firefox l..l
Mamaly an'i marcosSSS
Ary, farafaharatsiny, izany no nanehoan'ny tarehimarika azy talohan'ny "ny fanitsiana farany", fa na dia marina aza fa "tena tsy fahita firy fa madio foana ny profil" dia marina ihany koa fa samy manana azy izy ireo " mitovy amin'ny maloto »miaraka amin'ny fanaingoana, fanitarana ary data hafa ihany.
Fa ny famaritana izay lazain'ny olon-kafa etsy ambany dia ny fahatsiarovana no zava-dehibe indrindra ary ambonin'izany rehetra izany dia tsy mitovy dika amin'ny "fahazavana". ny tena fahazavana dia eo amin'ny fampisehoana ary izany no mahatonga ny olona maro miresaka momba an'i Chrome sy Opera ho maivana sy haingana, ary Firefox ho toy ny shit +++ (afa-tsy ireo mpankafy azy mazava ho azy).
Hatramin'ny andiany 14 FF dia tena tsy zaka, hatramin'ny kinovan'ny 15 ary amin'ny 16 ankehitriny dia niasa tsara be indray, landy.
Mifanohitra amin'izany no izy, Chromium, izay mpizaha toerana ahy mandraka ankehitriny, niova ratsy kokoa tao amin'ireo kinova roa farany, nandany ny processeur _tony be loatra na dia tsy miasa aza - ny foto-kevitry ny boaty fasika dia tena tsara fa ao amin'ny Chrome / Chromium dia tsy dia nampiharina tsara , andao lazaina ...
Soa fa tsy nino intsony ireo latabatra ireo intsony aho ela u_u
Abimael martell dia hoy izy:
hahaha, izaho koa
Valiny tamin'i Abimael Martell
Eto aho dia tsy mikasa ny haneho aminao ny tena fahamarinana, fa ny fihetsik'ireo mpitety tranonkala voalaza etsy ambony eo amin'ny sehatry ny asako, ary mazava ho azy ... manasa anao aho hametraka ny angon-drakitrao 😀
Tsy mifindra amin'ny Firefox aho amin'izao fotoana izao raha te hijery browser. Hoy aho!
Efa roa izahay
Amena. Nanandrana imbetsaka aho nanova FF ho ​​an'ny mpitety tranonkala hafa ary tsy afaka nahazatra izany mihitsy. ny lesoka (izay ananan'izy rehetra), tsy dia lehibe loatra ho ahy. Mbola ny tsara indrindra!
Iray indray amin'ny klioba, tsy manova Firefox / iceweasel / icecat aho.
Tsy manova azy koa aho. Notsapaiko tamin'ny halaliny ny Opera, ary tsara izany ... saingy tsy maimaim-poana ary tsy Firefox. Ary koa miaraka amin'i Chromium dia nanandrana tamim-pitsapana bebe kokoa nandritra ny volana vitsivitsy aho. Tsia, tsy afaka manolo an'i Firefox izy ireo.
Efa telo izahay!
Farafaharatsiny amin'ny Internet, na amin'ny solosaina findainy sy ny toerana misy azy, Firefox, mila fotoana maharitra ny famoahana pejy izay miaraka amin'i Chromium na Chrome, hitako segondra vitsy. Azo antoka fa tsy maintsy mahita ireo addons napetrako tao aho, saingy maharitra ela, manelingelina ..
Miarahaba ny mpiara-miasa.
misy 4 izahay, FireFox FTW!
wpgabriel dia hoy izy:
Hoy aho hoe 5
Valio i wpgabriel
joavig dia hoy izy:
6 ... (ary nandeha an-tongotra rehetra aho)
Mamaly an'i joavig
searchello dia hoy izy:
Ahoana no maha samy hafa ny chrome sy ny chromium ka hafa ny mihazakazaka?
Mamaly an'i seachello
Ireto misy fahasamihafana: http://en.wikipedia.org/wiki/Chromium_%28web_browser%29
Chrome dia Chromium fa misy zavatra manokana ao amin'ny google. Tsy dia fantatro loatra hoe firy amin'ireo zavatra ireo no misy, saingy fantatro ny iray izay mety ho amin'io vola io ho an'ny ondrilahy: Ilay mpamaky PDF tafiditra.
Azo antoka fa tsy izany ihany.
Ankoatra ny zavatra hafa, Chrome dia mitondra ny plugin adobe misy azy ary koa EULA tena tsara.
53.9 MiB ao amin'ny Firefox 10.0.9
56.7 MiB ao amin'ny Opera 12.02
Fampitahana tsara ary ny marina dia betsaka no voalaza sy voaresaka momba an'io. Ny marina aorian'ny IE sy Firefox miaraka amin'ny Google browser dia ao amin'ny lisitry ny be mpampiasa indrindra. Eto dia mety hisy hanontany ny antony, satria amin'ny lafiny maro, ny ankamaroan'ny mpampiasa dia manapa-kevitra ny iray na ny iray hafa noho ny fahaizany mamoaka atiny tranonkala tsy misy olana be (Ok, tsy izy rehetra, ampahany tsara amin'ireo).
Izaho manokana dia mampiasa WEB (Epiphany amin'ny solosaina finday sy Midori eo amin'ny birao) ary ny marina dia na dia manana ny antsipiriany kely aza izy ireo dia tsy ratsy.
Misaotra noho ny angon-drakitra ary hotehiriziko ho fanovozan-kevitra izany, satria ny fidirana amin'ny tranonkala dia fanomezana vahaolana mitsangana ary zava-dehibe ny fanjifana azy ho fanampin'ny fiarovana.
Eny, tsy niresaka momba an'i Midori aho fa tsy nametraka azy 🙂
Misaotra anao tamin'ny hevitra 😀
Fanitsiana an'ity fehezanteny manaraka ity, miaraka amin'ny fanahy manorina:
»Tsy marina daholo ireo angona ireo. Mitranga izany fa ny Google Chrome sy ny Chromium dia samy tsy mampiasa kofehy tokana, noho izany ireo mpitsikilo roa ireo dia TSY mandany izany. Mba hanazavana azy tsara kokoa, asehoko anao ny pikantsary, miaraka amin'ireo dingana rehetra ataon'ny Chromium: »
Izy rehetra dia mampiasa kofehy be dia be, kambana 35 eo ho eo no ampiasaina amin'ny firefox. Ny mitranga dia mampiasa dingana maro i Chrome / Chromium. Ny kofehy dia tsy inona fa ny vatan'ny fanatanterahana ary azo ampiharina amin'ny fomba maro. Ny dingana iray dia rafitra fitadidiana sarotra kokoa, ary ny dingana tokana dia mety misy kofehy maro.
Misaotra tamin'ny fanazavana 😀
Raha ny fahitana azy voalohany, dia toa toa tsy misy afa-tsy kofehy na dingana iray fotsiny no ampiasain'i Firefox (hanaraka ny ohatra), saingy tsy tena mazava ny fahasamihafana misy eo amin'ireo 🙂
Efa nianatra zavatra vaovao aho, misaotra betsaka 😉
Tena tsara. Raha te-hahita ireo kofehy isaky ny dingana ianao dia afaka mampiasa ny htop utility. Ity dia mitanisa ireo fizotrany sy ireo kofehy, saingy azonao fantarina hoe inona ireo kofehy satria mizara ny PID-n'ny fizotrany. Miaraka amin'ny H (Shift + h) sy K (Shift + k) dia afeninao avy amin'ny habaka ampiasain'ny mpampiasa (tsy afangaro amin'ny kofehy haavo an'ny mpampiasa) sy ny kofehy avy amin'ny habaky ny valan-kernel (tsy tokony hafangaro amin'ireo kofehy ambaratonga).
Htop dia tsy mampiseho ireo antsoina hoe ambaratonga-haavon'ny mpampiasa, satria ny fizotran'ny mpampiasa no namorona azy ireo ary izy irery no mahalala azy ireo. Ny kernel dia tsy mahita afa-tsy ireo kofehy na rthread an'ny kernel, izay noforonina tao anatin'ny fizotry ny mpampiasa fa tamin'ny alàlan'ny antso ho an'ny kernel, izay fantatra amin'ny ankapobeny ho faka faka. Ireto kofehy farany ireto dia ireo izay mamela ny hampiasa core mihoatra ny iray (ara-batana na virtoaly) miaraka amin'izay hanatanterahana ny dingana mitovy.
Eny, vao omaly aho dia niresaka tamin'ny elav fa hahita ireo kofehy azonao ampiasaina htop 😀
Misaotra noho ny hevitra nataoko namana, tena ataoko 🙂
PS: Isaky ny mianatra bebe kokoa momba ny fizotrany, ny kofehy sy ireo hevitra ireo aho hehehe.
Firefox koa dia manana ny fizotran'ny plugin-container na zavatra toa izany
Ny nosoratan'i @ Ankh dia izay holazainy xD
Ary koa, lazao fa ny fihinanana ondrilahy amin'ny programa dia iray amin'ireo antony tsy mahaliana indrindra amin'izao fotoana izao hisafidianana tranonkala iray. Voalohany, satria ny ankamaroan'ny solosaina ankehitriny dia manana ondrilahy ampy tsy hatahoranao azy. Faharoa, satria saika ny fampandrosoana rehetra dia mifantoka amin'ny fitaovana finday, ny fototry ny mpitety tranonkala rehetra ankehitriny dia mihevitra ny lafiny tsy fanararaotana ilay ondrilahy.
Ary izao no zavatra: ny tena ady dia ataon'i Gecko, WebKit, ary Presto.
Mazava ho azy fa miankina amin'ny tontolo iainantsika, ho tsara kokoa ny iray na ny iray. Ilay iray tena tsy hampiasaiko intsony amin'ny Linux dia ny Opera. Na dia manana fanohanana tena tsara ho an'ny WebGL aza izy io, amin'ny ankapobeny dia tsy mandeha tsara toa ny tiako hatao amin'ny Linux, ka herinandro teo dia najanoko ny fampiasana azy amin'ny birao. Firefox sy Chromium no mahavita azy tsara indrindra, ny lohahevitra dia misy tsiro. Ary ho an'i KDE, satria tsy mampiasa Qt ny roa etsy ambony, dia toa hendry kokoa noho ny Opera ny Rekonq (mbola tsy nosedraina aho).
Nisy vitsivitsy tsy hita, toa an'i Midori, Epiphany, ary Qupzilla. Ny latabatra koa tena tsara 🙂
Mandany be i Chrome rehefa ampidirina ny tab sy ny add-on. Ho an'ny fampiasana omeko ny browser dia io no mavesatra indrindra (manana tabilao maromaro misokatra foana aho).
longinus dia hoy izy:
Raha ny ahy dia tsy lanin'ny Firefox intsony ny enti-manana betsaka toy ny teo aloha, efa nihatsara ireo bandy Firefox ary hita fa kely fotsiny dia lanin'ny Chromium aho ary tsy misy addons, fuuuu ary tsy lazaina intsony rehefa manana kiheba maromaro aho.
Mamaly an'i longinus
raha ny ahy manokana dia ny firefox no mandeha tsara indrindra ho ahy, miasa izy io, ny chrome sy ny chromium dia voadidy matetika (xubuntu 11.10, 512 ram, 1.6 Ghz) tsy nanandrana azy…. Ho hitako izay mitranga xD
Tsy mety aminao ny mampiasa rekonq satria mampiasa tranomboky kde izy io, raha ny anao dia tsara kokoa io midori io
Nanandrana aho, ratsy…. nihoatra ny firefox ny fanjifana, miaraka amin'ny google open fotsiny dia nandany 96 mb miampy dingana maro (eo amin'ny 20) ny 3 megabytes tsirairay avy amiko tsy fantatro hoe inona.
Nanandrana an'i midori aho taloha kelin'izay…. saingy tsy resy lahatra aho, fa izao dia hanohy miaraka amin'ny FF mandra-panavao ny siny.
Mieritreritra aho fa hijanona tsy hampiasa opera intsony fa hanandrana zavatra maimaim-poana kokoa.
Fantatrao ve ny fihetsiky ny rekonq na ny qupzilla? Mampiasa kde 4.9 aho.
ubuntero dia hoy izy:
Milaza aminao ny zavatra niainako aho, nitaraina momba ny fanjifana FF fa rehefa nifindra tamin'ny hafa aho dia nahatsapa fa "miadana" ny horonan-taratasy ary toa mavesatra ny tabilao, amin'ny farany mifikitra amin'ny FF foana aho 😉
Mamaly an'i ubuntero
Raha mahaliana ny fampitahana 0 / tiako ny rekonq, mila mahazo fitoniana fotsiny aho hahatonga azy io ho tranokalan'ny maso. raha mampiasa ny firefox mahatoky 😀 aho
mgmoon dia hoy izy:
Ny opera ihany no ampiasako ary manana ilay rohy opera nohafanaina, fantatro fa tsy io no maivana indrindra, fa mahomby amiko
Nosokafako hamaky ity fanehoan-kevitra ity momba ireo mpitety ao amin'ny kubuntu, miaraka amin'ny ctrl + esc, hitako fa mandany 143004k!
Mamaly an'i mgluna
Mampiasa Opera aho ary mbola hanohy hampiasa azy io satria na inona na inona isa, io no mpitety haingana indrindra ary mahatsapa tena ahazoako aina ny mijery amin'ny Opera.
Opera dia tsy maivana, fa lavitra ny mavesatra indrindra.
Araka ny naseho tsara, ny Chrom * dia manana kofehy misokatra maromaro, ary amin'ny Gnome, raha Opera kosa mandany 200 MB miaraka amina tabila misokatra maromaro, ao amin'ireo fanjifana 2 hafa dia mipoitra avy any 320-340 ao amin'ny Chormium sy Chrome, ary tsy nanandrana aho izany amin'ny distro tokana, na dia teo amin'ny tontolon'ny birao foana aza izy io.
Ka tsy haiko hoe aiza no ahazoan'izy ireo fa "mandany" an'io na amin'inona na amin'iza na amin'iza na amin'iza amin'ny 2 Chrom *. Amin'ity tranga ity, raha hampiasa zavatra maivana noho ny Opera ary miaraka amina fampiasa maro dia maro ny FF, na dia tsy mihoatra ny 80-90 MB aza ny fahasamihafana.
Ho ahy ireo no safidy 2 tsara indrindra (Opera sy FF), ny fanjifana ny MB (raha ny mombamomba anao, izany dia efa olana iray hafa tena lehibe hiatrehana) ny Chrom * dia tsy mahatonga ahy hieritreritra hoe mendrika azy ireo izy ireo izay atolotray.
Chromiun Rulez hahaha Noheveriko foana fa ny Firefox no nihinana ny Ram ary toa marina ny nolazaiko
Firefox «-» RAM 65MB
Chromium «-» RAM 64MB
Izy ireo dia misaraka 1MB, ufffff, tena "marina tanteraka" ianao.
Fanontaniana iray fantatrao ve ny antony hivoahan'ny Chrome raha avy amin'ny Chromium aho?
Nanova zavatra ao amin'ny UserAgent ve ianao?
Vao haingana aho no nilavo lefona tao amin'ny Firefox. Jereo, efa niasa mandrakizay ny vokatra Mozilla aho, tamin'ny fotoanako tamin'ny Windows sy ny olan'ny fiarovana azy. Ary navelako tsikelikely teny an-dalana izy ireo: Sunbird, Thunderbird…. ary ankehitriny Firefox. Heveriko fa mpandresy hafa no mandresy amin'ny lalao, saingy azoko koa fa miady amin'ireo goavambe i Mozilla ary mila ny fanohanan'ny mpankafy mahatoky ... .. saingy tato ho ato dia nihantona tamin'ny pejy sasany aho .... ary fantatro fa noho ny fivoarany ratsy kokoa ho an'ny Linux io. Chrome no mpijery tsara indrindra nampiasako, tamin'ny lafiny rehetra, hatramin'ny andron'ny Firefox, fony izy nanomboka nalaza teo amin'ny tsena.
Raha amin'ny Linux indrindra no iasan'ny Firefox tsara kokoa, farafaharatsiny mba manana PC desktop miaraka amin'ny Windows 7 aho, tsy mbola nahita lozam-pifamoivoizana nitety Linux sy Windows 7 izay tsy azoko antsoina hoe fianjerana, dia nataoko izany. tsy manova azy ho tsy misy aho, na dia izany aza ny hevitro.
… Ary manohy mandiso fanantenana ahy ny Opera. Betsaka ny zavatra azo alamina ary ho an'ny tsiriko dia be atao loatra. Tokony hahazo "suite de cruise" sy navigateur tsotra ianao, tsy dia mihinana firy.
uke26 dia hoy izy:
Efa ela aho no nampiasa Opera ary nanomboka nanandrana an'i Rekonq ho an'ireo safidy kde teratany. Izy io no mpizaha tena lehibe ahy ary manarona ny filako hatramin'ny 95%. Marina fa mbola misy lesoka ihany, saingy ao anatin'ny fotoana fohy dia manana hetaheta hanosotra ny soroka amin'ireo lehibe amin'ny resaka fahaiza-manao izy. Amin'izao fotoana izao dia manana: speeddial, bookmarks, preview tabs, tadidio ny teny miafina, motera fikarohana manokana, omnibar, na izay rehetra iantsoana azy (karohy ao amin'ny bara adiresy, ohatra ary izay karoka tadiavinao ao amin'ny youtube) fampifanarahana tsoratadidy, tenimiafina, tantara miaraka amin'ny ftp. Andao fa tsy navigateur kely akory izy io.
Valio ny uke26
Ie, LEHIBE tokoa i Rekonq!
Mampalahelo fa mampiasa add-on Firefox aho ary tena be loatra ... satria i Rekonq dia mandeha haingana kokoa ho ahy, manokatra betsaka kokoa, ary mandany kely kokoa… andao, LOL saika tonga lafatra!
jorgepablo dia hoy izy:
Tena tsara ny lahatsoratra, ary vao avy nanamafy azy io aho, opera sy chrome fotsiny no ampiasaiko, satria amin'ny fehin-kevitro taorian'ny fitsapana nataoko dia ireo no haingana indrindra rehefa mizaha, izay no tena tanjon'ny mpitety tranonkala rehetra, satria aleoko ry zareo, ilaina ny mahafoy 20mb fanampiny raha afaka mandeha haingana kokoa aho.
Mamaly an'i jorgepablo
Ry namako, ny olana dia tsy 20 MB loatra izy ireo, iray amin'ireo nameno ny takelaka tamin'ny browser aho, ary efa 20-24 eo ho eo aza no nosokafana tao amin'ny Firefox, zavatra izay tantanan'ny Firefox tsara ny fitadidiana, fa rehefa Manandrana an'io ao amin'ny Chrome aho, hita ny tsy fitoviana, satria ny takelaka tsirairay dia mampitombo be ny fanjifana, ary manome toky anao aho fa tsy 20MB fotsiny izany, fa 200-300MB bebe kokoa tamin'ny ahy, izay raharahako rehefa ampiasaiko ao ny solosaina finday ary ity dia mitovy amin'ny fanjifana loharanom-pahalalana = fanjifana bateria bebe kokoa = kely ny androm-piainany.
Rehefa tiako haharitra kokoa ny bateria dia mampiasa Epiphany aho izay manana fanjifana loharano tena kely, nefa matetika aho mampiasa Firefox.
Manao fifandraisana hafahafa ianao fa ny fitadidy bebe kokoa dia ny bateria ampiasaina bebe kokoa toa ny hoe lalàna izay mbola tsy henoko mihitsy.
Etsy ankilany, ny fanjifana fahatsiarovana ambany dia tsy tratry ny tsy misy, izay mazàna midika fa tsy maintsy tambinina amin'ny asa fanodinana bebe kokoa ary mamaky / manoratra bebe kokoa amin'ny kapila, noho izany dia tsy nanana fanjifana bateria ambany kokoa ianao fa amin'ny mifanohitra amin'izany.
Ny kinova Alpha dia natao hanampiana sy hizaha toetra vaovao, tsy natao hanamboarana bibikely, mety tsy dia manana bibikely sy miasa tsara izy ireo, saingy loteria ny hahafantarana raha manana na tsia.
Ny kinova Beta YES dia ny manitsy ny bibikely sy miomana ho lasa kinova tsy miovaova, saingy azo antoka fa raha nampiasa ny kinova Beta an'ny Google Chrome aho dia natsipy tao anaty tsinay izay nanoratra ilay lahatsoratra.
Rehefa miditra amin'ny tranokala ianao, ny fotoana anaovana azy dia mety ho ny Firefox dia mandany 30% sy Chrome 20%, fa raha vao feno ny pejy web dia samy mampihena ny fanjifany amin'ny ambaratonga fanodinana, mijanona amin'ny 1 na 2%, fa tsy RAM mbola voatazona, izay araka ny nolazaiko taminao fa mandany bebe kokoa ny Chrome.
Mazava ho azy fa mavesatra pejy aho, fa amin'ny tsirairay amin'izy ireo dia mandany fotoana be aho amin'ny famakiana nefa tsy nanovako izany ary tsy nametraka iray hafa, noho izany dia afaka manome toky anao aho fa zavatra io dia mahamarika ahy.
Ary eny, mazava ho azy, manao sorona RAM aho nefa tsy mieritreritra an'izany mba hivezivezy haingana hahaha, fa ny fetrako dia tsy ny browser, fa ny fantsom-pankahalana maharikoriko 😀
Tsy natao ho an'ny tsy misy izy io, fa maninona ianao no mampiasa kinova miovaova amin'ny mpitety rehetra ary amin'ny firefox dia mampiasa kinova Alpha ianao izay mety ho feno lesoka sy fahatapahana tadidy Ao amin'ny Firefox 16.0 dia mandany ahy kely kely noho ny Chromium izy io
Na ny mifanohitra amin'izay no izy, ny kinova alpha no azo ahitsy raha ny kinova azo antoka kosa dia mbola mitondra ny olan'ny vesatra sy ny fivoahana foana.
Miala tsiny, diso ny nametrahako ny valiny etsy ambony:
Ny fialan-tsiny ho anao dia ny dikan'ny Firefox izay nampiasako hatrizay dia ny, 18a1 ... Nampiasa alpha tamin'ny alpha aho nandritra ny fotoana fohy, vao niasa tranon'omby aho tao anatin'ny herinandro maromaro 😀
Raha ny marina dia tsy nanana olana tamin'ny alphas aho, tsy miovaova izy ireo amin'ny tranga Firefox.
meiganova dia hoy izy:
Valiny amin'i MeigaNova
Yep 😀… - » https://blog.desdelinux.net/tag/rekonq/
Hanombohana: lahatsoratra tsara.
Mikasika ny atiny, satria any Chakra aho dia apetrako ny Firefox, satria tsy ao amin'ny Qt izy io ary miasa tsy tapaka amin'ny tontolo KDE, manomboka, inona no olana apetraka amin'ny Espaniôla, farafaharatsiny any Chakra.
Etsy ankilany, amin'izao fotoana izao dia Opera aho, ny tsiambaratelo ao amin'ny Chrom * dia tsy mampiahiahy, noho izany dia nifidy Opera aho, na dia fantatro aza fa tsy "loharano misokatra" tanteraka izany.
Nanandrana an'i Reqkonq aho, fa ny olana (ary tsy nisy naneho hevitra momba izany) dia na dia avo aza ny fanjifana RAM an'ny Opera dia mandany CPU indroa heny noho ny Opera hatrany i Rekonq ary tsy mbola nisy navalin'iza na iza! . Androany ny ankamaroan'ny solosaim-birao dia misy RAM 2-4 Gb, saingy voafetra bebe kokoa ny CPU, indrindra raha mihazakazaka ny dingana hafa, ary rehefa mandany 4% ny Opera, mankany 8-9% ny RK, sns. indroa ny CPU.
Misaotra tamin'ny fanombohana 🙂
Tsy dia tsikaritro loatra ny fanjifana CPU be loatra avy any Rekonq, na dia tranokala tsotra toa ny GMail na ny FlatPress aza no ampiasako azy, ary koa tsy mijery horonantsary an-tserasera aho, ka tsy dia mijaly be loatra ireo mpanamory ahy 🙂
Mbola tiako be foana ny Opera, fa amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainana dia mampiasa Firefox foana aho 😀
Kakarot dia hoy izy:
Na eo aza ny zava-drehetra, nivoatra tamin'ny fomba mahavariana i Firefox, na dia mbola misy zavatra tokony hatsaraina aza, tsy manova ny skunk aho na inona na inona.
Valiny amin'i Kakaroto
Malahelo ny fitsapana litmus aho, manokatra tabilao maromaro ary mivezivezy, any no hamoahan'ny opera ny hatsarany ary hilentika ny raharaha sy ny chromium satria multiprocess ...
Toa klioban'ny mpankafy opera io, ny tena marina dia tsy ny manahirana ity browser ity hoy izy ireo, amiko dia tsy ampy izany ary mahatsiravina ny fivezivezena.
notapahiny dia hoy izy:
Mazava amin'ny Internet ny Opera ... ny tanjon'izy ireo dia ny hitahiry angona ... tena ilaina amin'ny fifandraisana Wi-Fi voafetra ... teboka iray manohana azy ... Opera mitantana ny cache anaovany azy ka tsy mila maka azy ireo indray ... raha misy ny fanavaozana ny sary masina na sary ... mamelombelona azy ao anaty elanelam-potoana ... Mikasika ny enta-mavesatra Ram ... ny Firefox dia alefa 1gb (manana 4gb aho, ny fihenan'ny booty dia 3.7) ary mitombo amin'ny fotoana nampiasanao azy ... inona izany?, Crhome na dia ny kofehiny rehetra aza dia 350 mb, ary amin'ny farany Opera misy 390 mb ... notsapaina tamin'ny pejy misokatra 12, 4 niaraka tamin'ny mpilalao adobe (youtube, XD sns) ary salan'isa 43 minitra. Ataovy ny fehin-kevitrao XD.
Valiny tamin'i Raje
tampoka ny Rekonq -.
Marina izany, marina izany, saingy nihatsara be tamin'ny dikanteny farany.
anubis dia hoy izy:
Amin'ny fampiasako dia mandany ahy kely kokoa ny alina (kinova firefona alohan'ny alfa)
Ampitahako amin'ny chromium izy io ary mandany ahy amin'ny dingana 30 1167,012 mb miaraka amin'ny tabilao 13 ary isaky ny alina miaraka amina famenony ary vondrona tabilao 3 izay mihoatra ny 30 dia mihetsika hatrany amin'ny 350mb ka hatramin'ny 360mb ary mazava ho azy, mandra-pahalany reraka ny plug-ing (madio kokoa ny chromium)
Nanao izany tamin'ny Ubuntu 12.10 x64 aho
Efa nanandrana ny mpitety rehetra aho, ho ahy ny opera haingam-pandeha indrindra, tsy tiako ny firefox ary mandany be loatra ary kopian'ny opera io. Tokony hasongadiko fa somary haingana ihany koa ny midori
Firefox mandany be
Androany ny solosaina dia misy fahatsiarovana betsaka ary raha tsy izany dia afaka manampy bebe kokoa hatrany ianao.
Tsy ny tena olana no tena lanin'izy ireo fahatsiarovana, ny zavatra ratsy dia rehefa mandany loharanon-karena CPU be loatra izy ireo.
Rehefa dinihina tokoa, ny toerana fahatsiarovana sy kapila rehetra dia tena mora raha oharina amin'ny sisa amin'ny fitaovana ary io no hany soloina na "azo havaozina" ampahany amin'ny solosaina finday.
Drive SMB avy any Console
Inona no hatao aorian'ny fametrahana Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal